Natiijada doorashada madaxtinnimada Congo oo Khilaaf dhalisay | Kaafi News
Natiijada doorashada madaxtinnimada Congo oo Khilaaf dhalisay
Image caption Waxaa su`aal mudan waxa uu noqonayo doorka madaxweyne Joseph Kabila ee natiijada doorashada
Muxuu Fayulu leeyahay?
Tiro taageerayaal ah u ah Fayulu ayaa isugu yimid dibadda halka uu ka deggan yahay magaalada caasimadda ah ee Kinshasa, iyadoo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah Kabila iyo Tshisekedi.
Si kastaba waxay gudaha u galeen dhismaha, kaddib markii ciidammada ammaanka ay halkaasi gaareen.
Mar uu u warramayay tifaftiraha BBC Africa Fergal Keane, ayuu Fayulu sheegay inuu maxkamadda geyn doono kiis doorashada ku saabsan.
Martin Fayulu ayaa Jimcihii taageerayaashiisa kula hadlay Kinshasa
Waa maxay natiijada doorashada ka soo baxday?
Sida uu ku dhawaaqay Guddiga Doorashada Qaran ee dalka Congo (Ceni), Tshisekedi ayaa helay 38.5% codadka doorashadii dhacday 30-kii December.
Natiijada ayaa sidan lagu sheegay:
Felix Tshisekedi – 7 milyan oo codad ah
Martin Fayulu – 6.4 milyan oo codad ah
Emmanuel Shadary – 4.4 milyan oo codad ah
Codadka khasaaray ayaa lagu sheegay 48%